अंग्रेजीको रमाईलो ! तपाईँलाई पनि थाहा छ भने थप्दै जाऔँ « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार १९:२५
काठमाडौं । अध्येता एवम लेखक वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतम (Chandramani Gautam) ले सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीको रमाईलो ! तपाईँलाई पनि थाहा छ भने थप्दै जाऔँ भन्ने शिर्षकमा धेरै वाक्य लेख्नु भएको छ । जहाँ अंग्रेजी शब्दको अर्थ नेपाली र नेपाली शब्दलाई अंग्रेजी भाषामा के भनिन्छ भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
(१) ल्याटिन, रोमन र ग्रीक भाषाबाहेक अँग्रेजीमा सबभन्दा बढी शब्द नाटककार विलियम शेक्सपियर एक्लैले घुसाएछन्— १७ सय शब्द । उनका ३७ वटा नाटक र १५४ कविताभित्र पसेका रहेछन् आगन्तुक शब्दका यी केही उदाहरण– Assassination (हत्या), Advertising (विज्ञापन), Blanket (पाखी), Champion (विजेता) Gossip
(बकम्फुसे कुरा), Generous (उदारमना), Lonely (एक्लो), Mimic (नकलबाजी), Ode (गीत वा ५० देखि २ सय पंक्तिको कविता), Puking (वाकवाकी/वान्ता गरिरहेको), Torture (यातना), Zany (मूर्ख टाईपको ठट्टावाज, मारुनी नाचको पुर्सुङ्गे) ।
(२) उल्टो सुल्टो जता पढ्दा पनि उस्तै शब्द वा वाक्यांश बन्ने अवस्थालाई Palindrome भनिन्छ, जस्तै— Madam, Radar, Refer, Nurses run । नेपालीमा पनि यस्तो त हुन्छ तर यसलाई एकल शब्दमा के भनिन्छ, म जान्दिन— जहाज, पाल्पा, नवजीवन, गया–प्रयाग आदि । भार्वी कविले ‘किरातार्जुननीयम्’ मा सुल्टो उल्टो जताबाट पढ्दा पनि हुवहु उही शब्द र अर्थ दिने संस्कृत श्लोक नै लेखेका छन्—
(३) नाम बाहेकका हिज्जे (Spelling) मा Q अक्षरका पछाडि U अवश्य आउँछ— Queen, Quarter, Qualm, Quotation; तर इराक (Iraq), तारिक (Tariq) जस्ता नामका Q पछि U नआउन सक्छ ।
(४) एउटै शब्द बहुअर्थी पनि हुन्छन्— Pen (खोर, खोरमा थुन्नु, कलम), Saw (देख्यो वा देखेँ, आरा, लकडी, आरा चलाउने) । “मैले एउटा आरावाललाई आराले लकडी चिरिरहेको देखेँ” भनियो भने त्यसको अँग्रेजी यस्तो हुँदो रहेछ— I sawasaw, singingasaw withasaw । झन् रोचक त यो वाक्य नै छ— Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo । व्याकरण अनुसार यो वाक्य शुद्ध रहेछ ।
बफ्यालो भनेको भैँसी वा अर्ना (बिजन), न्युयोर्क नजिकको एउटा शहरको नाम पनि बफ्यालो, ताकेता वा धम्की दिनु पनि बफ्यालो, अर्को समुदायलाई पनि बफ्यालो भनिने । वाक्य बनाउँदा यस्तो हुनेरहेछ— बफ्यालोका अर्नाहरूको एउटा समुदायले अर्को समुदायका अर्नाहरूलाई धम्क्याएपछि अर्को समुदायका अर्नाहरुको समुदायले पनि बफ्यालोमै धम्की दिए (Bison from Buffalo, New York, that are intimidated by other bison in the community also intimidate other bison in Buffalo.)
(५) अँग्रेजीमा मौन शब्द (Silent Letters) वा सुशुप्त उच्चारण (Silent pronunciation) पनि हुन्छन्, जस्तै gnat (न्याट अर्थात भसुनो), knife (नाइफ अर्थात चक्कु वा छुरा), aisle (अईल अर्थात सिटहरू वा दराजको लहरमा बीचको बाटो), debt (डेट अर्थात ऋण), soften (सफन अर्थात नरम वा गिलो पार्नु, गलाउनु, लोलोपोतो गर्नु), dumb (डम अर्थात बोल्न नसक्ने) ।
(६) ब्याकरण अनुसार शुद्ध भए पनि कतिपय वाक्य अशुद्ध हुन्छन्, जस्तै— I am not there ।
(७) अँग्रेजीमा एक (one) देखि सय (hundred) सम्म लेख्दा एक ठाउँमा पनि A अक्षर आउँदैन ।
(८) अँग्रेजीका स्वर वर्ण (Vowel) नभएको शब्द हुँदैन तर Try, By जस्ता शब्दहरू सेमी भोवेल लगाएर बनाइन्छ । सेमी भोवेल लगाएर बनाएको सबभन्दा ठूलो शब्द Rhythm हो ।
(९) संसारमा २ अर्बभन्दा बढी मानिसले जानेको भाषा भएकोले अँग्रेजीको विविधता ब्यापक छ । अमेरिकी, बेलायती, अस्ट्रेलियाली, क्यानाडाली, न्युजिल्याण्डी, भारतीय, द.अफ्रिकी, नाइजिरियाली गरी अँग्रेजीका ८ मुख्य उच्चारण, हिज्जे, शैलीका संस्करणगत विविधता छन् । यति धेरै ब्यापकता र विविधता भएको अर्को भाषा चल्तीमा छैन ।
(१०) नभुलौँ अँग्रेजी पनि नेपाली जस्तै एउटा भाषा हो यो स्वयं ज्ञान होइन (English isalanguage as well as Nepali, and not knowledge itself) ।
सुँगुरको डेढ किलो मासु खाने व्यक्तिलाई रेस्टुराँमा प्रतिबन्ध
पेन्गुइन ३ हजार किलोमिटर लामो यात्रा तय गर्दै न्युजील्यान्ड पुग्यो